Wax waliba oo aad ugu baahan tahay kulanka dhex mari doona xulalka Soomaaliya iyo Uganda – Gool FM
Wax waliba oo aad ugu baahan tahay kulanka dhex mari doona xulalka Soomaaliya iyo Uganda
Dajiye July 27, 2019
(Djibouti) 27 Luulyo 2019. Xulka qaranka Soomaaliya ayaa caawa la ciyaari doona dhigooda xulka Uganda ciyaar qeyb ka ah tartanka Chan Cup.
Kulankan ayaa ah mid aad u xiiso badan wiilasha ocean stars ayaa maalmihii ugu dambeyay waxey tababar adag ku qaadanayen dalka jabuuti oo caawa ciyaarta ay ka dhaceyso.
Sida caadiga ah tartanka Chan Cup waxaa ciyaara xiddigaha kubadda cagta ee ka dheela horyaalladooda dalalkooda, waxaana ciyaarta ugu horeysa caawa ay ka dhici doonta dalka jabuuti oo guri ahaan ay ugu ciyaarayan xulka qaranka Soomaaliya.
Wiilasha Ocean Stars ayaa horantii isbuucan waxey kulan saaxiibtinimo la dheeleyn xulka Jabuuti xili ay guuldaro 1-0 kala kulmeyn qaranka Jauuti kulankaas oo ahaa mid saaxiibtinimo ay wada ciyaareyn labada qaran.
Sanadkii 2018-kii aye aheyd markii iskugu dambeysay in ay is arkan labadan xul Uganda iyo Soomaaliya tartanka bariga iyo bartamaha Africa oo ka dhacay dalka Burundi xidigaha ka yar 17-sano jirada xiligaas ay Xulka qaranka Soomaaliya uu ku adkaaday 1-0.
Tartanka: Chan Cup
Xulalka: Somalia Vs Uganda
Saacada: 6:00 maqribnimo
Garoonka: Hagi Gulled.
RASMI: Barcelona oo shaacisay inuu ka tagay mid ka mid ah xiddigaheeda kuna biiray Koox cusub
“Aniga iyo Lionel Messi waxaan isaga egnahay wax walba” - Antoine Griezmann